Yaa Bixi waxaa habboon on Taariikhda a First - Advice Waayo, Ragga
Last updated: Dec. 27 2017 | 3 min akhri
Dadka leeyihiin nooc kasta ooMidho ah xaliso-upka marka ay timaado shukaansi, oo waxaa laga yaabaa in mid ka mid ah kuwa ugu badan waa dareen walwal ama diidmo ku saabsan bixinta taariikhda. Ragga duwan jawaabaan stress this. Nimanka qaarkood waxay mar walba bixiso, laakiinse si qarsoon dareensan tahay wax xun gudaha halka qoraal jeegga. Nimanka qaarkood waxay ku adkaysteen ina ay bixiso nus kasta oo ragga qaarkood bannaan cadhooday oo ku saabsan. Ragga qaarkood oo keliya si dhab ah uga cabsadeen reer muuqan qadiimka ah haddii ay bixiyaan si ay u bixiso biilka.
Waan ogahay rag kaliya balaadhan diidi doontaa inaad bixiso oo dhan taariikh koowaad, halkii sheegay in biilka waa in loo qaybiyo si sax ah qeybtii. Waa maxay sababta? Maxaa yeelay, iyagu ayaa ay soo mareen badan oo ka mid ah bixinta taariikhda qaali ah oo leh qof dumar ah oo kaliya in marnaba maqli iyada ka mar kale. Waxaa laga yaabaa in aad lahayd tani kugu dhacaan. Waxaa laga yaabaa in ay ahayd qof dumar ah oo aad u jeclaa, una Malaynaysaan aad vibing leh, si aad balan qaaday inay bixin, kaliya in ay iyada agtiinna ah oo dib uma soo wicitaankaaga. Amaba aad bixisay dhowr taariikhaha laga cabsado xaq xumo ama darned oo aad u caraysan. Lacag caddaan ah oo dhan way khasaariyey shaqo adag ku kasbatay. Oo anigu waxaan ka heli inaan runtii sameeyaan. Yaa ma dareemi lahaa xanuun!
In times kuwaas sinnaanta sababta nin la filayaa waa in ay cagta kharashka oo dhan biilka kaliya sababtoo ah waa nin? Haweenka rabnaa sinnaanta, sidoo halkan waa.
I daaya aan idiin sheegayaa wax qarsoon yar. Haddii tani ay tahay inaad, oo aad ku adkaysanaysa in iyada bar bixinta maalinta ugu horeysa ee, taasi cabsi-gelin doono iska dumar dhedig tayo wanaagsan kasta. Waxaad arki aan haweenka loo baro macaamiisha aan u noqon in ay tamar dhedig agagaarka nin oo ay taariikhda ku, waxay ka shaqaysaa hab fiican in. Taas macnaheedu waxa weeye helaya dhaafa oo u ogolaanaya nin iyada hindiga. Labadaba ma Waxaad noqon kartaa in aad tamarta rag ah, haddii kale hindiga ma ku barbaaraan. Waxa ay noqon doontaa wax dheeraad ah sida shukaansi aad saaxiibkiisa ugu wanaagsan, oo cad ka bixin doonaan biilka badhkiis. Sidaas halka Waxaan fahamsanahay niyadjabkaaga, Heer sare ah waxaan ku talineynaa sii wado inuu sameeyo wax ka gentlemanly oo bixinaya. Run ahaantii qof dumar tayo A aad ku faraxsantahay doonaa.
Hana keliya u qaban la haween aad rabto. Sii inay bixisaa taariikhda KASTA. Marka laga reebo xaqiiqada ah in tani waa qaabka kaliya cajiib wanaagsan iyo akhlaaq wanaag, koonkan waxa uu daawado iyo waxaad samaynayso camal fiicanfala. Waxa aan u tago inuu Weheshado doonaa.
Waxaan mar taariikh ka ee ahaa in aad u fiican. Si kastaba ha ahaatee dhamaadka nin dhab bixiyey calculator ah in aan kala tagno biilka saxda ah sida uu sheegay waxa la cuno oo wax cabbo lahaa oo (Si fiican ayaan u malaynayaa inuu ahaa xisaabiyaha on taleefankiisa laakiin weli). Sida ugu dhakhsaha badan waxay u dhaceen waxaan dareemay dhan jiidashada aan horay loo dareemayaa shubeyso xaq iga baxay of. WOW! Waxaan marnaba ka fekeri karaa isagoo leh qof sida tan – Haddii uu yahay sida tan haatan bal waxa uu noqon lahaa sida ay u la noolaan! Ma qiyaasi kartaa shopping ee IKEA ee alaabta guriga? Maxay ku saabsan on dhalashadiisa my, lahaa inaan lacag ka bar ka dibna aad? Ma aha mid aad taataabtay.
Iska ilaali inaad noqoto jaded ku saabsan bixinta by kaliya isagoo faraxsan oo ku saabsan. In ay u xoqdo oo ku qal- of shukaansi, qaar ka mid ah haweenka aad qaadato baxay waayi doonaa isla markaana uma soo noqdaan wicitaankaaga. Waa par ee koorsada. Waxaad samaysay isku qof meel ay weheliyaan khadka haddii aad tahay si waxashnimo daacad naftaada la I soo duuduubo. Si kastaba ha ahaatee, markii aanu aad marwada imaan, oo aad uga dareemaan gaar ah oo loo abuuro hindiga maxaa yeelay, waxaad balan qaaday inay bixin, taas oo keliyana ma soo gabagabeyso doonaa jiidashada, laakiin iyada ayaa kuu aqoonsan doonaa xoog ah, nin rag ah aad tahay.
Sidaas waxaan leeyahay ha ka welwelina isagoo duq ah qabanqaabiyey - aynu qaataan mawqif ah ee chivalry, hindiga iyo hamiday. Waa maxay sababta ma ahan oo keliya dib u fadhiisan oo wuxuu ku raaxaysan Raalli aad keeni kartaa in qof dumar ah oo ay samaynayaan waxan nooc iyada u, haddii aad doonayso in aad mar ama ma arki. Waxaad markaas bask karaa aqoonta in aad tahay sax ah a, si buuxda u shaqaynaysa oo nin madax-bannaan, kuwaas oo dooran kartaa in lagu daaweeyo qof dumar ah, kaliya sababtoo ah waxa uu awoodo. Dareen faani.